Hay’adda Xureynta Shaam ayaa ku dhawaaqday in ciidamadoodu ay la wareegeen Afar tuulo oo kaabiga ku haaya garoonka melleteriga magaalada Xammaah.
Islaamiyiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta deegaanada Alas-kandariyah iyo Tal Bazaam oo wax ka yar 4 KM ujira magaalada caasimadda u ah gobolka Xammaah.
Wariyaal ayaa soo sheegay in xoogaga mucaaradka ah ay wadaan xamlad dagaaleed lagu xaaqay ciidamada nidaamka nusreyiga iyo maleeshiyaadka shiicada Ururka Xisbul sheydaan.
Sarkaal u hadlay hay’adda Xureynta Shaam ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ay qabsadeen 12 degmo oo ay ugu weyntahay magaalada Sowraan ee istiraatiijiga ah islamarkaana ay qaniimeysteen gaadiid gaashaaman iyo Keydad hub ah.
Horumarkan dhanka dagaalka ah ee xoogaga islaamiga ah kasoo hooyeen saaxada dagaalka gobolka Xammaah ayaa wax badan ka bedelay habsami u socodka dagaalka Suuriya, maalmo ka hor ayay aheyd markii dagaallo culus oo ka dhacay magaalada Dimishiq ay xoogaga mucaaradka ah iyo mujaahidiinta ku qabsadeen xaafado muhiim ah.
Dhinaca kale duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday degmada Darkoosh ee gobolka Idlib ayaa lagu dilay hoggaamiye sare oo katirsanaa Hay’adda Xureynta shaam oo horay loo oran jiray Jabhadda Al Nusrah.
Duqeynta oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ayaa lagu dilay Sheekh Abul Cabbaas Alsuuri oo kamid ahaa saraakiisha mujaahidiinta.
War kooban oo kasoo baxay Taxriiru shaam waxay ku sheegtay in uu shahiiday Abul Cabaas oo ahaa sheikh indhoole ah balse saameyn ku dhax lahaa jihaadka Suuriya islamarkaana ahaa daaci shabaabka muslimiinta ku boorin jiray ka qeyb galka dagaalka jihaadka ah.
Maalmihii dambe waxaa sare ukacay duqeymaha dowladda Mareykanka ay ka geysanayso wadanka Suuriya waxaana duqeymahaas lagu dilay saraakiil sarsare oo katirsanaa Ururka alqaacidda iyo hay’adda xureynta shaam balse duqeymaha qaar ayaa lagu laayaa shacab rayid ah sida xasuuqii jimcihii lasoo shaafay mareykanku ay ka qeysteen masjid kuyaal gobolka Xalab ee waqooyiga Suuriya.